MZ Third Anniversary — MYSTERY ZILLION
MZ Third Anniversary
February 2010 edited April 2010 in MZ News
လာမယ့်သူများ အောက်က form တွင်ဖြည့်ပေးစေလိုပါသည်။ form မဖြည့်ပဲနှင့်လည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ form ဖြည့်ခိုင်းရခြင်းမှာ လက်ဆောင်များပေးရန်အတွက် ရည်ရွည်ပါသည်။ နေရာနှင့်အချိန်ကို သေချာလျှင် ပြန်ကြေငြာပါမည်။ ဒီနှစ် အခြား နှစ်တွေလို မဟုတ်ပဲ beginner နဲ့ Professional တွေကြားမှာ medium သဘောမျိုးအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။
လူငယ်တွေ ဘာသိချင်လဲ။ ဘာဖြစ်ချင်လဲ။
ဘာလို့ beginner ကနေ တက်ရတာ ခက်နေတာလဲ။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ဖို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေ ရဖို့ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ။
အဓိက ဆွေးနွေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ MZ အနေနဲ့လည်း လက်ရှိ အောင်မြင်နေတဲ့ geek တွေကို ကြိုးစားဖိတ်ပေးပြီး လူငယ်တွေရဲ့ အမေးတွေကို ဖြေကြားပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါမယ်။
ဒီနှစ်ပွဲကိုတော့ exiter က ဦးဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။
ရက်စွဲကို အမြန်သတ်မှတ်မှနဲ့တူတယ်။ ဒါမှ လာမယ့်သူက ဒီရက်ဆို လာနိုင်မယ်၊ ဒီရက်ဆို မလာနိုင်ဘူး ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာ။ ဒီတစ်ခါ ဧပရယ်ဖူး မလုပ်ကြေးနော်။
ဒါနဲ့date ့က မနှစ်ကအတိုင်းဆိုရင်တော့ လာဖြစ်ဖို ့မလွယ်ဘူး စာမေးပွဲရှိတယ်ဗျ
ဟုတ်ပါတယ်။ လုပ်မဲ့အစီအစဉ်မှ မသေချာသေးတာ လာမယ်မလာဘူး ဘယ်လိုပြောနိုင်မှာလဲ။
လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုမကြိုက်ပါ ။ မပေးနိုင်ရင်နာမည်ပျက်ပါသည်။
April ၃ ရက် သို့မဟုတ် ၄ ရက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ နေရာကို မြို့ထဲမှာလုပ်ဖို့ပဲများပါတယ်။ နေရာအတိအကျသိရင် ထပ်ကြေငြာပါ့မယ်။ နောက်ပြီး လူဘယ်လောက်လာမလဲ သိမှ အခန်းအကျယ်အဝန်းနဲ့ နေရာကို ဌားရန်ဖို့ အဆင်ပြေမှာမို့ပါ။ လက်ရှိတော့ YMCA မှာ လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရာရမရမသေချာသေးပါ။ April ၃ ရက် သို့မဟုတ် ၄ ရက်ကတော့ သေချာပါတယ်။
လက်ဆောင် အစီအစဉ်အစား အစားအစာကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း လူဘယ်လောက်လာမလဲ မှန်းခြေလေး လိုအပ်လို့ပါ။ လာနိုင်မယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေ တချက်လောက် Form လေး ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ အခြား Seminar ပွဲတွေနဲ့ မတူပဲ လာနားထောင်မယ့်သူတွေ သိချင်တာတွေကို ဖြေသွားမယ့် ပုံစံနဲ့စဉ်းစားထားပါတယ်။ ကိုယ်သိတာ ကိုယ်ပြောပေမယ့် အော်... သူတော်တော်သိပါလားလို့ပဲသိပြီး ပြန်သွားရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ beginner တွေအနေနဲ့ လက်ရှိ real world မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ professional တွေရဲ့ဆွေးနွေး လမ်းညွှန်မှုတွေ ရအောင် ကြိုးစားပေးပါ့မယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့်သူတွေ ဘာသိချင်လဲဆိုတာ သိမှ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာအကြောင်းတွေ ပြောမယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ထုတ်နိုင်မှာပါ။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ မတ်လ နောက်ဆုံး အပတ်လောက်ကြေငြာပေးပါ့မယ်။
ရက်ကတော့ April4ရက် Sunday နေ့ဆိုတာသေချာသွားပါပြီ ။ Sunday ဆိုတော့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကော ကျောင်းသာတွေကော အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နေရာကတော့ ဒီနေရာမှာပဲ သေချာရင် ဆက်ကြေငြာသွားပေးပါမယ် ။ လောလောဆယ်တော့ မြို့ထဲက YMCA မှာလုပ်ဖို့မှန်းထားပါတယ်။
to dear admins and mods
at this moment,i wanna to get MZ feed seriously.
[ugly_cat] wrote: »
ဘာကိုမေးတာလဲဟင် ဘယ်လို Feed ကိုလိုချင်တာလဲ
လာရမှာပေါ့..ငဇူးတို ့လာမယ်။ :d
ဟုတ်တယ်ဗျ. မနှစ်ကအတိုင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့လား. Mz ကပွဲလုပ်ရင်ကွန်ပျူတာကျောင်းသားတွေစာမေးပွဲဖြေနေတဲ့အချိန်ကွက်တိကြီး :d
စာမေးပွဲက ဘယ်နေ့လဲမသိဘူး ?
လာမယ် ... :d
နယ်ရောက်နေရင်လဲ လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးလာခဲ့မယ် .... မနှစ်ကလဲ မော်ကျွန်းရောက်နေလို့ မလာနိုင်ဘူး။
ဒီနှစ်တော့ လာမယ် ...
လာဖြစ်အောင်လာမယ်ဗျာ။မနှစ်ကမလာလိုက်ရလို့။အားလုံးအဆင်ပြေမယ့်နေ့ဆိုပိုကောင်းမယ်။ကျနော်ကတော့ ဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်လာမှာဘဲ။တခုလောက် အကြံပေးကြည့်မယ်နော်။ကွန်ပျူတာကျောင်းကလူ တွေလဲ စာမေးပွဲရှိလဲ လာပါလားဗျာ။တနေကုန်အချိန်ကုန်တာမှမဟုတ်တာ။ကျနော်ကို ၀ိုင်းပီးတော့မေတ္တာမပို့ကြနဲ့နော်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လက်ရှိ survey ကောက်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေပေးဖို့ real world ထဲမှာ လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို ဆွေးနွေးပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး computer လောက ထဲဝင်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေမှာပါ။ စတင်လေ့လာကာစသူတွေလည်း ဘယ်လိုင်းတွေရှိတယ် ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားအောင်လာစေချင်ပါတယ်။ computer ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အကျိုးရှိမှာပါ။ ဒါကြောင့် computer ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ အနေနဲ့ လာစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာမေးပွဲဘယ်နေ့ပြီးမလဲ တိတိကျကျ သိချင်ပါတယ်။
စာမေးပွဲက ၁၀ ရက်နေ့ပြီးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၁၁ ရက်နေ့ဆို အဆင်ပြေပေမယ့် သင်္ကြန်နဲ့ နီးတော့ လာဖို့ စိတ်ဝင်စားပါ့မလားလို့လည်း ဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။ ၁၁ ရက်နေ့ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုနေပါလဲ။ ပိုအဆင်ပြေပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ လာလည်းလာချင်ပါတယ် မနှစ်ကကြတော့ စာမေးပွဲနဲ ့တိုက်နေလို ့မလာဖြစ်ဘူး ဒီနှစ်တော့လည်း မလာဖြစ်တော့ဘူး အောက်မေ့နေတာ
ကိုစေတန် အခုလို ရွေ ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ရမှာပါ စာမေးပွဲမရှီရင်တော့ ကျွန်တော် ကျိန်းသေးလာဖြစ်မှာပ့ါ
၁၁ရက်နေ့ဆိုရင်လာရမှာအဆင်မပြေလောက်ဘူးထင်တယ် သင်္ကြန်နဲ့ နီးလာတယ်နော ်ကျွန်တော်လဲရန်ကုန်မှာမရှိလောက်တော့ဘူး အခြားရက်လေးကိုညှိနှိုင်းပေးပလား
မရပါ။ ၄ ရက်နေ့ ၁၁ ရက်နေ့ ဘယ်နေ့လုပ်မလဲဆိုတာကို တိုင်ပင်နေဆဲပါ။ အဲဒီ ၂ ရက် ထဲက ၁ ရက်ပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ချင်တာကတော့ ၄ ရက်နေ့ပေါ့။ ၁၁ ရက်နေ့ ရွှေ့လို့ရရင် ရွှေ့မလားစဉ်းစားနေတာပါ။ အဲဒီ ၂ ရက်ထဲက ၁ ရက်ပဲ လုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဟူး ... လာချင်ပါတယ်ဆိုကာမှ
စာမေးပွဲနဲ့တိုက်သွားပြန်ပြီ ... ဘီလိုလုပ်ရမလဲ ...
I wanna to read MZ by my google reader.
how can i get MZ feed.?
Firefox, Safari and Opera ဆိုရင် Address Bar မှာ RSS Feed Icon တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ IE ဆိုရင်လည်း Tool bar မှာ RSS Feed Icon ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုသုံးလည်းရတယ် ဒါမှမဟုတ် Manually ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ RSS လိပ်စာကိုသုံးပါ။
ဘယ်နေ့လုပ်မယ် ဘယ်နေရောမှာလုပ်မယ် ဘယ်အချိန်လုပ်မယ် ဆိုတာကို အတိအကျ ဘယ်တော့လောက် သိရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
25 ရက်နေ့ YMCA မှာလုပ်မှာပါ။ မနက် ၉ နာရီ သို့မဟုတ် ၁၀ နာရီလောက် စဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အချိန်ကိုတော့ YMCA ကို စုံစမ်းဖို့လိုပါသေးတယ်။
အကို သေချာမသိလို့မေးပရစေ အပါ်မှာ တွေသမျှလုပ်မဲ့ရက်တွေ့က ၄ရက်နေနဲ့ ၁၁ရက်နေ့တွေ ပါ
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ၂၅ရက်ရောက်သွားတာလဲအကို နောက်ြ့ပီး ၂၅ ရက်နေ့က လေးလပိုင်းလား
သုံးလပိုင်းလား အကိုတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် ရက်နဲ့အချိန်လေးကို အတိအကြလေးကြော်ငြာပေးပါနော်အကို
၄ လပိုင်းပါ။ အသေအချာလည်း ကြေငြာထားပါတယ်။
ခု MZ ရဲ့ (၃) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ဟာ (၁) ရက်နေ့မှာပြည့်တာဆိုတော့ (၂၅) ရက်နေ့ကိုရွှေ့လိုက်တော့ တစ်ကယ့်နှစ်ပတ်လည်နေ့နဲ့ အရမ်းမကွာလွန်းဘူးလား။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ MZ ရဲ့ (၃) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အတွက် ကျွန်တော့်ဘက်က ကူညီနိုင်တာများရှိမယ်ဆိုရင်
ဟုတ်ကဲ့။ ကွာသွားပါတယ်။ အခြား စီစဉ်စရာလေးတွေလည်း မပြီးပြတ်သေးတာကြောင့် သေချာတဲ့ အချိန်ကို လုပ်လိုက်တာပါ။ ကူညီတဲ့အနေနဲ့ Survey form လေးကို တချက်လောက်ဖြည့်ပေးပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ လူတွေဘာသိချင်လဲသိထားပြီး သိချင်တာလေးတွေကို ပြန်ပြောပေးဖို့ စီစဉ်နေလို့ပါ။
ပထမ တစ်ခေါက်တုန်းက Myanmar Egress မှာ လုပ်မှာဆို၊ ခု YMCA မှာလုပ်မှာလား .....
နေရာမှာ ပြီး သွားမိလို့ Thamada Hotel ထဲမှာ လည်နေဦးမယ်.....
Myanmar Egress Hall Room မှာလုပ်မှာသေချာသွားပါပြီ ...
အကိုတို့ရေ ကျနော်က မန္တလေးကပါ ရန်ကုန်ကိုလည်း သေချာမသိပါဘူး ပွဲလေးကိုလည်းလာချင်ပါတယ်
ဘယ်နေ့့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာလေးကို သေချာလေးပြောပေးပါလားခင်ဗျာ လာချင်လို့ပါ နောက်ပြီး
ဘာများကူလုပ်ပေးရမလည်းဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ် နေရာလေးကို သေချာပြောပေးပါ
shinthant01 wrote: »
ကိုရှင်းသန် ့ရေ ဒီလင့်မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ အကိုသိချင်တာတွေ ရှိတယ်
ဒီနေ့ကတော့ mz နှစ်ပတ်လည်ပွဲ ကျင်းပတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ် အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား!!!!!!!!!!!!!!
လာဖြစ်သွားပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ မကျေနပ်တာ အများကြီးရှိတယ်ဗျာ ... ဘာကိုလဲ ... သိလား .. ကိုစေတန်ရ ..
အားလုံး အဓိကထားဆွေးနွေးသွားတာ .. ဘာကိုလဲ ဆိုတာ တက်တဲ့သူတွေ အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ် ... ... Web Developing ပိုင်းကိုပဲ ဘာလို့ အားလုံးပြောသွားတာလဲဗျာ ... ကျန်တဲ့ IT ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် .. Networking, Hardware, Server ပိုင်းတွေ, OS ပိုင်းတွေ လုံး၀ မပြောကြဘူးနော် .. Web Developer မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ... Professional မဖြစ်နိုင်တော့ သလိုပဲဗျ .. သူတို့ Discuss လုပ်သွားတဲ့ အတိုင်းသာ ပြောရ ရင်ပေါ့ဗျာ ..
အားလုံး စိတ်တော့ မဆိုးနဲ့ဗျာ .. စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်းေ၀ ဖန်ကြည့်တာပါ ....
ဒီတစ်ခေါက် MZ ပွဲကတော့ လုံး၀ မပြည့်စုံ သလိုပဲဗျာ ...
အင်.. web အပိုင်းတွေများတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်..
မနက်ပိုင်း ကိုပီဇီပြောတဲ့ Online learning တို့၊ ကိုရာဗီပြောတဲ့ Tips on Studying in Myanmar တို့က အရမ်းကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ ဘယ်သူ့အတွက်မဆို အကျိုးရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးဆွေးနွေးသွားတဲ့ beginner to professinal ကလည်း မဆိုးပါဘူး။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ နည်းနည်း နည်းနည်း သွေဖယ်သွားပေမယ့် သိသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေပဲ မဟုတ်လား။
ဟိုလိုလိုကတော့ လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအတွင်းမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျေနပ်ပါတယ် ဒီနေ့ပွဲနားထောင်ရတာ။
skkyehtut wrote: »
အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ ကွန့်မန့်များ ( No . I don't mean to ma hololodilolo :P ) ထက် ဒီလို negative feedback များကို ကြိုဆိုပါတယ်
Web Developing ပိုင်းကိုပဲ ဘာလို့ အားလုံးပြောသွားတာလဲဆိုတော့ ပြောတဲ့သူများအားလုံးဟာ Web Development ကို အားသန်တဲ့သူများဖြစ်နေတာပါ။
Networking, Hardware, Server ပိုင်းတွေ, OS ပိုင်းတွေ .. အဲဒါနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့တော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က လိုအပ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မေးလို့ ရပါတယ်လို့ မပြောခဲ့မိလို့ပါ။ သို့ပေမယ့် မေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြေနိုင်တဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ ဥပမာ - ကိုရာဗီပေ့ါလေ.. ။
Networking, Hardware, Server ပိုင်းတွေ, OS ပိုင်းတွေ လုံး၀ မပြောကြဘူးနော်
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲဒီအပိုင်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြောမယ့်လူလည်း ရှာမရသွားတာလည်းပါပါတယ်။ အဲဒီအပိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးက ပြည်ပရောက်နေကြပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာရှိတာက web development ပိုင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ကျွန်တော် သိတဲ့အထဲမှာတော့ Network , Hardware , Server ပိုင်းတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးက စလုံးမှာပဲဗျ။ Network သမားတွေကလည်း MZ နဲ့ နည်းနည်းစိမ်းပါတယ်။ Network ပိုင်းတွေက ကိုကိုရဲကို လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Hardware နဲ့ Server ပိုင်းကတော့ ပြည်တွင်းမှာက တော်တော်ရှားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဲဒီ စျေးကွက်မရှိတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဝေဖန်တာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် ဒီထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။
လူအရမ်းနည််းတယ်ဗျ ဆွေနွေးတာတွေကတော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ် ရှေ ့ကလူတွေ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာနောက်က တစ်ချိူ ့တွေဆူနေတာတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်ဗျ အမှန်အတိုင်းမြင်ကြည့်တာပါ
article ကလည်း အရှေ ့ကပြောသလို web အကြောင်းချည်းပဲပြောသွားတယ် နောက်ပြီး MZ ကို stackoverflow ပြောင်းတဲ့ကိစ္စကလည်း သုတ်သုတ်နဲ ့ပြောသွားတာ ကျွန်တော်တို ့တောင်ဘာမေးရမှန်းမသိဘူး နောက်ပြီး ကိုရဲ ကလည်း ဘယ်လိုဖြစ်လို့ubuntu အကြောင်းမပြောဖြစ်တာလဲမသိဘူး anyway ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ ကိုရာဗီပြောသလို forum သီးသန် ့တစ်ခုတော့လိုမယ်ထင်တယ် Vbulletin ရယ်မှမဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်လည်းရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က web အကြောင်းစိတ်၀င်စားတဲ့သူမို့လို့ ဆွေးနွေးသွားတာတွေစိတ်အရမ်း၀င်စားပါတယ်။
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ သူတွေရော အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့သူတွေရော
လူကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အရောက် ၆၀ ဝန်းကျင်လောက်ပဲ မှန်းထားပါတယ်။ Newsletters ကို ၁၀၀ ပဲ ထုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ စာရင်းအရ ၉၆ ယောက်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေမှာ ဒီထက်ကောင်းအောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။
Let me confess frankly,
I haven't made ready for my topic : MZ 2.0 System and Android Development because I've no idea to talk before. Thus, I surely know that there are lots of weakness in my topics.
Kindly accept my apologize.
yea.. it's like what you said "သုတ်သုတ်နဲ ့ပြောသွားတာ" .. I was serious due to an important case. But I've asked you all "if there are any unclear case, let me know " .. but as you see, no reply , right ? also I assume that it's my "သုတ်သုတ်နဲ ့ပြောသွားတာ" .. my bad
anyway ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ ကိုရာဗီပြောသလို forum သီးသန် ့တစ်ခုတော့လိုမယ်ထင်တယ်
forum for what ? I'm not sure what you mean
btw, you can also ask about this system at Satunr's thread ..
ဒါကဒီလိုရှိပါတယ်။ MZ ကို ပုံစံပြောင်းမဲ့ဟာကိုပြောတာပါ။
အမေးဖြေပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အတွက် community ပုံစံပျောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် fourm ကို သတ်သတ်လုပ်ပါလို့ ပြောချင်တာ ဖြစ်မယ်။